डेंगी लामखुट्टेबाट कसरि जोगिने ? - भरोसा खबर
डेंगी लामखुट्टेबाट कसरि जोगिने ?
काठमाण्डौं, डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो । यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ ।
यसले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ । खास गरी वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, रंगका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला, पानीका ट्ंयाकी आदिमा यस्ले फुल पार्दछ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्तमात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे सहरमा बढी देखिने गर्दछ ।
महोत्सवमा हेलिकप्टर शयरदेखि छाँगावरोहणसम्म
बागलुङ, १ मङ्सिर (रासस) :दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सव बुधबारदेखि शुरु हुँदैछ । गलकोट नगरपालिका–५ हरिचौर, बसाहफाँटमा हुने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा प�....